News Collection: मेरो विवाहपछिको जीवन सफल वा असफल के हुने हो ?
मेरो विवाहपछिको जीवन सफल वा असफल के हुने हो ?
म २६ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ। मेरो वजन ६६ किलोग्राम छ र म शाकाहारी हुँ। विगत एक-डेढ वर्षदेखि एक २५ वर्षीया विवाहित युवतीसँग महिनाको एक वा दुईपटक यौनसम्पर्क गर्दै आएको छु। उनका श्रीमान् अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा छन्। मैले उनीसँग गरेका हालसम्मका यौनसम्पर्क ४० मिनेटभन्दा कम समयको छैन, फलस्वरूप उनी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन्छिन्, तर मेरो वीर्य स्खलन हुँदैन अर्थात् केही समय लाग्छ, यो के कारणले भएको हो ? म सन्तुष्ट नभएका कारण उनलाई मुखमैथुन गर्न अनुरोध गर्छु र उनले मुखमैथुन गरिदिन्छिन्, जसको ५—१० मिनेटपछि बल्ल स्खलन हुन्छ र म सन्तुष्टिका साथै पूर्ण थकित महसुस गर्छु। मलाई शीघ्र यौन उत्तेजना पनि आउँदैन, यौनसाथीसँग यौनसम्पर्क गर्न तयार हुँदा पनि। सबै कपडा फुकालिसकेको नांगो स्त्रीशरीर सँगै हुँदा त तुरुन्त उत्तेजनामा आउनुपर्ने हो, तर त्यसो नभै करिब २०-२५ मिनेट अन्य क्रियाकलाप गरेपछि बिस्तारै-बिस्तारै उत्तेजना बढ्दै जान्छ। यस्तो किन भएको हो ? मेरो आफ्नै साथीकहाँ परीक्षण गर्न जाँदा उसले मेरो कुरामा खासै रुचि नदिई हाँसोमा उडाइदियो। केही दिनपछि फेरि म अर्को एक जना डाक्टरकहाँ गएँ। उहाँले आजसम्म यस्तो समस्या भन्न कोही नआएको भनेर मेरो कुरालाई गम्भीरता पूर्वक लिई सल्लाह दिनुभयो। उहाँको सल्लाहअनुसार यो समस्या करिब म ३० वर्षको पुगेपछि विस्तारै घट्दै जाने हँुदा चिन्तित नहुन आग्रह गर्नुभयो। रक्तपरीक्षण सामान्य नै देखियो। फेरि उहाँले अन्य केही प्रक्रियाका बारेमा बताउनुभयो र त्यो प्रक्रिया धेरै लामोजस्तो लागेकाले मैले रुचि देखाइनँ। मेरो विवाहपछिको जीवन सफल वा असफल के हुने हो ?
किन ढिलो स्खलन
प्राकृतिक रूपमै हामीमा यौनचाहना हुन्छ। वंशको निरन्तरताका लागि यौनसम्पर्कको आवश्यकता भएकाले त्यसतर्फ आकषिर्त गर्न प्रकृतिले नै हामीभित्र यो चाहना राखिदिएको हो, जुन तपाईंमा राम्रै भएको बुझिन्छ।
लिङ्गको योनिमा प्रवेशपछि धक्का दिन सुरु गरेको यस्तै २ देखि ४ मिनेटमा प्रायःजसो व्यक्तिको वीर्य स्खलन भैसक्छ। वीर्य स्खलनमा कठिनाइ हुने व्यक्तिमा पर्याप्त समय (उदाहरणका लागि ३० देखि ४५ मिनेट) सम्म र धेरै प्रयास गरे पनि वीर्य स्खलन हुँदैन। वीर्य स्खलन ढिलो हुने कारणहरूलाई विश्लेषण गर्दा यौनप्रति नै नकारात्मक धारणा हुनु, यौन साथीप्रति आकर्षण नहुनु, कुनै विशेष स्थितिमा मात्र यौन चरमसुख वा वीर्य स्खलन गर्ने बानी पर्नु वा यौन तथा वैवाहिक सम्बन्धलाई लिएर कुनै दुःखद घटना घट्नुजस्ता कुरा कारकका रूपमा आउन सक्छन्। रिस, आवेग वा तनावको स्थितिमा वीर्य स्खलन हुन कठिनाइ हुन्छ। केही औषधी (जस्तै कि उदासीपनको उपचारमा प्रयोग हुने) पनि यसको कारण हुन सक्छ। स्नायु प्रणालीको खराबी अर्को कारण हुन सक्छ। तपाईंकी साथीले मुखमैथुन गर्दा तुलनात्मक रूपमा सजिलै वीर्य स्खलन गर्न सक्ने भएकाले तपाईंको यो समस्याको कारण शारीरिक भन्दा मानसिक हुनुपर्ने देखिन्छ।
यौन उत्तेजना र लिंग उत्तेजनाका कुरा
यौनेच्छा प्राकृतिक रूपमा सबैजसो स्वस्थ व्यक्तिमा हुन्छ। मानव जीवनका लागि भोक, निद्रा, प्यासजस्तै यौन पनि आवश्यक कुरा हो। सामान्य भाषामा भन्दा यौनसम्पर्क राख्ने वा यौन तनाव शान्त पार्ने इच्छालाई नै यौनेच्छा भन्न सकिन्छ। यौनेच्छा वा यौन व्यग्रता मानसिक तथा भावनात्मक जैविक व्यग्रतासँग सम्बन्धित स्वाभाविक शक्ति हो। तपाईंमा यौन व्यग्रता पर्याप्त भएको बुझिन्छ, तपाईंले यौनआनन्द प्राप्तिका लागि प्रयास गर्नुभएका कारणले नै। त्यसैले तपाइर्ंले यौन उत्तेजना भए पनि लिङ्ग उत्तेजनालाई संकेत गर्नुभएको हो कि भनेर आफूलाई त्यतै केन्द्रित गरेको छु, अन्यथा पुनः पत्र लेख्नुहोला। राम्रोसँग लिङ्ग उत्तेजित नहुने विभिन्न कारणमध्ये शारीरिक तथा मानसिक दुवै हुन सक्छन्। समय लागे पनि योनि-लिङ्ग तथा मुखमैथुनमा संलग्न हुँदा लिङ्ग उत्तेजित भएकाले तपाईंको समस्या शारीरिक कारणले हो जस्तो बुझिँदैन। त्यसैगरी तनाव, चिन्ता, ग्लानि, उदासीपन, आत्मविश्वासको कमी, यौन सक्षमताको चिन्ता, यौनसम्बन्धी कुरामा अरुचि, यौन जोडीसँगको सम्बन्धमा भएको एकनासपनले दिक्क हुनु, यौनरोग वा अन्य रोग लाग्ला कि भनेर चिन्ता, भावनात्मक असन्तुलन वा अन्य मनोवैज्ञानिक रोगजस्ता कुराले पनि लिङ्ग उत्तेजित नहुन सक्छ। तनावपूर्ण वा मनमा भय भएको स्थितिमा भने लिङ्ग उत्तेजित नै नहुन वा भएको उत्तेजना पनि हराउन सक्छ। यौन साथीलाई आफ्नो यौनक्षमता प्रदर्शित गर्नुपर्ने दबाब भए समस्या अझ चर्को हुन सक्छ। यस्तो स्थितिलाई peformance anxiety भनिन्छ। यस विषयमा पनि राम्रोसँग आफ्ना कुरा केलाएर पत्र लेख्नुभए जवाफ दिन सजिलो हुने थियो।
के चरमसुख प्राप्त गर्न वीर्य स्खलन हुनैपर्छ ?
यौन चरमसुख प्राप्त गर्नु र वीर्य स्खलन दुवै सँगसँगै हुने भएकाले एउटै कुरा हो जस्तो लाग्छ, तर यी एकदमै फरक प्रक्रिया हुन्। कतिपय व्यक्तिले वीर्य स्खलन भए पनि चरमसुख प्राप्त गरेका हुँदैनन् भने अर्कातिर कतिपय व्यक्तिले वीर्य स्खलन नभएको स्थितिमा पनि चरमसुख प्राप्त गरेका हुन्छन्। यौनसम्पर्क सुखमय हुन वीर्य स्खलन हुनैपर्ने भन्ने अपेक्षा राखिन्छ, तर बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यो अपरिहार्य कुरा होइन, तर वीर्य स्खलन हुनैपर्छ भन्ने कुराले मानसिक रूपमा दबाबमा पर्ने स्थिति आए त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ।
विवाहमा नकारात्मक असर पर्ला कि ?
महिलाले यौनसन्तुष्टि पाउने स्थितिमा तपाईंको ढिला वीर्य स्खलन सकारात्मक कुरा नै हुनसक्छ। तपाईं आफ्नो यौन सुखमा बढी नै केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ। आफ्नो सुखमा मात्र केन्द्रित हुने व्यक्तिको वैवाहिक जीवनमा मात्र होइन, सामाजिक जीवनमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। आफ्नो सुखमा मात्र केन्द्रित नभै दुवैले अधिकतम यौनसुख प्राप्त गर्न कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिई काम गर्न सके वैवाहिक जीवन सुखमय रूपमा बिताउन सकिन्छ।
अन्तमा, एउटा कुरा के पनि भनौं भने हाम्रो जस्तो समाजमा विवाहतेर सम्बन्धले वैवाहिक जीवनमा जटिलता उत्पन्न गर्छ भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्नु आवश्यक छ।